ESI MELITE KAADỊ VIDIYO NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Anyị na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala nke kaadị vidiyo na Windows 7
Kaadị vidiyo bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke kọmputa ahụ. Ọ bụ ọrụ maka igosipụta ndị niile na-ese foto na nyocha. Iji mee ka ihe ntanetị gị jikọọ ya na ọbụna ngwá ọrụ kachasị ọhụrụ, yana iji kpochapụ ụdị dịgasị iche iche, ndị ọkwọ ụgbọala maka ya ga-emelite mgbe niile. Ka anyị hụ otú a ga-esi mee nke a na PC na-agba Windows 7.
Ụzọ iji melite ngwanrọ vidiyo
A ga - ekewa ụzọ niile iji melite kaadị vidiyo dị ka nnukwu ìgwè atọ:
Site n'enyemaka nke ngwanrọ nke atọ nke ezubere iji melite ọkwọ ụgbọala;
Jiri ngwa ntinye vidiyo nke ngwa ngwa;
Iji naanị ngwaọrụ sistemụ.
Tụkwasị na nke ahụ, nhọrọ maka ime ihe na-adaberekwa ma ị nwere ndị ọkpụkpọ vidiyo ndị a dị mkpa na mgbasa ozi kọmputa ma ọ bụ ịchọta ha na Ịntanetị. Ọzọ, anyị ga-eleba anya na ụzọ dị iche iche maka imelite akụkụ nke usoro ahụ akọwapụtara.
Dịka e kwuru n'elu, ịnwere ike imelite site na iji ngwanrọ ndị ọzọ. Tụlee otu esi eme nke a na ihe atụ nke otu n'ime usoro ndị a ma ama maka mmezi ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala zuru ezu.
Mwepụta ngwa DriverPack Solution. Ha ga-enyocha usoro a, nke a ga-esi tinye usoro nhazi nke ndị ọkwọ ụgbọala.
Mgbe nke ahụ gasị, oghere ọrụ ihe omume ahụ ga-emeghe ozugbo, ebe ịkwesịrị ịpị na mmewere "Wụpụta kọmputa na-akpaghị aka".
A ga-emepụta ihe mgbake, mgbe ahụ, a ga-ahazi PC ahụ na-akpaghị aka, gụnyere ịgbakwunye ọkwọ ụgbọala na-efu ma na-emelite ndị ahụ agafeghị, gụnyere kaadị vidiyo.
Mgbe usoro ahụ gasịchara, ozi na-egosi na windo DriverPack Solution na-agwa gị gbasara usoro ntọala nke ọma na mmelite ọkwọ ụgbọala.
Ụzọ nke usoro a bụ na ọ dịghị achọ mmelite na mgbasa ozi kọmputa, dị ka ngwa na-achọgharị na-akpaghị aka maka ihe ndị dị mkpa na Ịntanetị. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ịghọta na ọ bụghị naanị na ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo ga-emelite, ma ngwaọrụ ndị ọzọ niile. Mana n'otu oge ahụ, enwerekwa mmezigharị nke usoro a, n'ihi na mgbe ụfọdụ, onye ọrụ achọghị imelite ụfọdụ ọkwọ ụgbọala, yana wụnye ngwanrọ ọzọ nke DriverPack Solution setịpụrụ na ọnọdụ akpaka. Karịsịa ebe ọ bụ na mmemme ndị a anaghị aba uru mgbe nile.
Maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ịchọrọ onwe ha ihe a ga-arụ na ihe ọ bụghị, enwere ụdị ọkachamara na DriverPack Solution.
Ozugbo ịmalitere ma nyochaa usoro DriverPack Solution, na ala nke usoro ihe omume ahụ na-emepe, pịa "Ụdị ọkachamara".
Advanced DriverPack Solution window ga-emeghe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye naanị ọkwọ ụgbọala vidiyo, ma achọghị ịwụnye ngwa ọ bụla, nke mbụ, gaa na mpaghara ahụ "Ịwụnye Software Nhazi".
N'ebe a, chọpụta ihe niile dị iche na nke ha. Ọzọ, pịa taabụ "Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala".
Ịlaghachi na windo ahụ akọwapụtara, hapụ akpaaka ndị ahụ na-ahụghị ihe ndị ahụ ị chọrọ imelite ma ọ bụ wụnye. Jide n'aka na ị ga-ahapụ akara n'akụkụ ọkwọ ụgbọala vidiyo ahụ achọrọ. Wee pịa "Wụnye niile".
Mgbe nke ahụ gasị, ntinye nke ihe ahọrọ ahọrọ, gụnyere mmelite nke ọkwọ ụgbọala vidiyo.
Mgbe usoro ahụ gasịchara, dị ka ọ dị na omume gara aga, windo ga-emeghe, na-agwa gị banyere mmezu ya nke ọma. Naanị ikpe a ga-arụ ọrụ naanị ihe ndị dị mkpa ị họọrọ onwe gị, gụnyere nwelite nke ọkwọ ụgbọala vidiyo.
Na mgbakwunye na Ọkwọ ụgbọalaPack, ị nwere ike iji ọtụtụ mmemme ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, DriverMax.
Mmelite ọkwọ ụgbọala na Ọkwọ ụgbọala DriverPack
Mmelite ọkwọ ụgbọala na DriverMax
Usoro 2: Software Video Card
Ugbu a, ka anyị chọpụta otú ị ga-esi melite onye ọkwọ ụgbọala vidiyo na iji kọntaktị vidiyo nke ejikọrọ na kọmputa. Ihe algorithm nke omume nwere ike ịdị iche iche dabere na onye mepụtara nke ntaneti vidiyo. Ka anyị malite nyochaa usoro ahụ na ngwanrọ maka NVIDIA.
Right click (PKM) site na "Desktọpụ" na na ndepụta na-egosi, họrọ "NVIDIA Control Panel".
Ogwe ngosipụta nke vidiyo na-emepe. Pịa ihe "Enyemaka" na nhazi menu. Site na ndepụta, họrọ "Mmelite".
Na window ntọala nke mepere emepe, mepee taabụ. "Nhọrọ".
Ịga na mpaghara ahụ dị n'elu, rịba ama na n'ógbè ahụ "Mmelite" n 'uzo ozo "Onye ọkwọ ụgbọala ọhụụ" a setịpụrụ akara. Ọ bụrụ na ọ bụghị, tinye ya wee pịa "Tinye". Mgbe nke a gasịrị, laghachi na tab "Mmelite".
Ịlaghachi na taabụ gara aga, pịa "Nyocha maka mmelite ...".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-eme usoro iji chọpụta mmelite dịnụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke onye mmepụta vidiyo. Ọ bụrụ na enwere mmelite emelite, ha ga-ebudata na arụnyere na PC.
Nkuzi: Otu esi emelite onye nyocha VIDIA gị
Maka kaadị vidio AMD mepụtara, a na-eji ngwanrọ a na - akpọ AMD Radeon Software Crimson. Ị nwere ike imelite ọkpụkpọ vidiyo nke onye ọrụ a site na ịga na mpaghara "Mmelite" usoro a na ala nke interface ya.
Ihe ọmụmụ: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo na AMD Radeon Software Crimson
Mana maka ịmepụta na ịrụ ọrụ ochie AMD ndị na-arụ ọrụ ntanetị, jiri ikikere Catalyst Control Center ngwa ngwa. Site na njikọ dị n'okpuru ị ga-ahụ otu isiokwu gbasara otu esi eji ya ịchọ ma melite ndị ọkwọ ụgbọala.
Ihe Ọmụmụ: Na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala Kaadị Video dị na AMD Catalyst Control Center
Nzọụkwụ 3: Chọọnụ maka mmelite ọkwọ ụgbọala site na ID ntanetịime vidiyo
Ma ọ na - eme na ịnweghị mmelite dị mkpa na aka, nchọta akpaka anaghị enye ihe ọbụla, na maka ụfọdụ ihe ị na - enweghị ike ma ọ bụ ịchọghị iji mmemme nke atọ ndị ọkachamara iji chọpụta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Kedu ihe ị ga-eme n'okwu a? N'ọnọdụ ndị dị otú a, ịnwere ike ịchọta ọkwọ ụgbọala vidiyo ọfụma maka ID nke ntanetị. A na-arụ ọrụ a n'ụzọ ụfọdụ "Onye njikwa ngwaọrụ".
Mbụ ị chọrọ iji chọpụta ID ID. Pịa "Malite" ma gaa "Ogwe njikwa"
Na oghere oghe, pịa ihe ahụ "System na Nchebe".
Ọzọ na ngọngọ ahụ "Usoro" gaa na edemede ahụ "Onye njikwa ngwaọrụ".
Nkwupụta "Onye njikwa ngwaọrụ" ga-arụ ọrụ. Nnukwu ya na-egosiputa ndepụta nke ngwaọrụ dị iche iche ejikọrọ na kọmputa. Pịa aha "Ihe ntaneti vidiyo".
Ndepụta nke kaadị vidiyo ejikọrọ na kọmputa gị ga-emeghe. Ọtụtụ mgbe a ga-enwe otu aha, mana ma ọ bụ ọtụtụ.
Pịa okpukpu abụọ na aha nke vidiyo vidiyo achọrọ na bọtịnụ òké aka ekpe.
Njirimara vidiyo na-emepe. Gaa na ngalaba "Nkọwa".
Na mpaghara oghere, pịa n'ubi "Ihe onwunwe".
Na listi adaala na-egosi, họrọ "ID ID".
Ozugbo ahọpụtara ihe a n'elu, na mpaghara ahụ "Uru" A na-egosi ID kaadi vidiyo. Enwere ike inwe ọtụtụ nhọrọ. Maka ịmatakwu nke ọma, họrọ nke kachasị ogologo. Pịa ya PKM na n'ime nhọrọ menu họrọ "Detuo". A ga-etinye uru NJ dị na keyboard PCboard.
Ugbu a ịkwesịrị imeghe ihe nchọgharị wee gaa n'otu saịtị ndị na-enye gị ohere ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala site na NJ hardware. Ihe kachasị ewu ewu na weebụ bụ devid.drp.su, site na ihe atụ nke anyị ga-atụle ihe ndị ọzọ.
Ịga na saịtị ahụ akọwapụtara, kpaa n'ime ozi nchịkọta ọchụchọ nke e depụtaghachiri na mbụ na windo na windo ụlọ ọrụ. N'okpuru ubi dị n'ógbè ahụ "Ụdị Windows" pịa nọmba "7", ebe anyị na-achọ mmelite maka Windows 7. N'aka aka nri, lelee igbe dị n'akụkụ otu n'ime ihe ndị na-esonụ: "x64" ma ọ bụ "x86" (dabere na bit os). Mgbe edechara data niile, pịa "Chọta Ndị Ọkwọ ụgbọala".
Mgbe ahụ windo ga-apụta na-egosipụta nsonaazụ dabara na ọchụchọ ọchụchọ. Ịkwesiri ịchọta ọhụụ ọhụrụ nke ọkwọ ụgbọala vidiyo. Dị ka a na-achị, ọ bụ onye mbụ ị ga-enye. Ụbọchị ịhapụ ya nwere ike ịhụ na kọlụm ahụ "Ọkwọ ụgbọala". Mgbe ịchọta nhọrọ ikpeazụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Download"dị na akara kwesịrị ekwesị. Usoro nchịkọta faịlụ faịlụ ga-amalite, na-eme ka onye ọkpụkpọ vidiyo na-ebudata na diski ike PC.
Biakute "Onye njikwa ngwaọrụ" ma meghee ngalaba ọzọ "Ihe ntaneti vidiyo". Pịa na aha nke vidiyo vidiyo. PKM. Họrọ na menu ndokwa "Melite ndị ọkwọ ụgbọala ...".
A windo ga-emeghe ebe ị kwesịrị ịhọrọ usoro nwelite. Pịa aha "Chọọ ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa a".
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ga-emeghe ebe ị ga-achọ ịkọ ndekọ ahụ, diski ma ọ bụ mgbasa ozi dị n'èzí ebe ị debere nwelite melite na mbụ. Iji mee nke a, pịa "Nyochaa ...".
Window meghere "Chọgharịa nchekwa ..."ebe ịkwesịrị ịkọwa ndekọ ndekọ nchekwa nke melite ebudatara.
Mgbe ahụ, enwere nlọghachi azụ na windo mbụ, ma na adreesị ndekọ nke ndekọ ahụ achọrọ. Pịa "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-arụnyere ntanetị batrị vidiyo. Ọ ga-amaliteghachi kọmputa ahụ ọzọ.
Ihe nkuzi: Otu esi achọta onye ọkwọ ụgbọ ala ID
Usoro 4: Njikwa Ngwaọrụ
I nwekwara ike imelite ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo na-eji naanị ngwa ngwa Windows 7, ya bụ otu "Onye njikwa ngwaọrụ".
Mepee windo maka ịhọrọ usoro nwelite. A kọwara otú e si eme nke a Usoro 3. N'ebe a, ọ dabere na ịnwere na mgbasa ozi (flash drive, CD / DVD-ROM, draịvụ ike PC, wdg.) Ịchọtara ọkpụkpọ vidiyo mbụ ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ọ bụ, wee pịa aha ahụ "Chọọ ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa a".
Na-esote, rụọ otu ọrụ ndị a kọwara na usoro mbụ, malite na paragraf nke 16.
Ọ bụrụ na ịnweghị nghazi ọkwọ ụgbọala vidio njikere, ọ ga-adị gị mkpa ime ihe dị iche.
Na windo maka ịhọrọ usoro mmelite, họrọ nhọrọ "Akpaaka akpaaka ...".
N'okwu a, usoro ahụ ga-achọ mmelite na Ịntanetị, ma ọ bụrụ na achọpụtara, tinye nwelite nke ọkwọ ụgbọala vidiyo.
Iji mezue echichi ahụ, ị ​​ga-achọ ịmalitegharịa PC ahụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi melite ọkpụkpọ vidiyo na PC na Windows 7. Nke n'ime ha ịhọrọ ga-adabere na ịnwere ntanetị dị na mgbasa ozi kọmputa ma ọ bụ na ịchọrọ ịchọta ya. Maka ndị ọrụ ndị na-achọghị ịbanye n'ime usoro nwụnye ma ọ bụ chọrọ ime ihe niile ngwa ngwa o kwere omume, anyị na-akwado iji software pụrụ iche iji chọpụta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka. Ndị ọrụ toro eto karịa, ndị na-ahọrọ ka ha chịkwaa usoro dum, nwere ike ime ka ntinye ederede nke melite "Onye njikwa ngwaọrụ".